China ST-30H Non-invasive ventilator orinasa sy ny mpanamboatra |Micomme
Vahaolana Ventilation Non-invasive avo lenta
-Ny fifantohana oksizenina marina
-Teknolojia fanamafisam-peo mandeha ho azy Premium, fampifanarahana amin'ny milina tsara
1. Fomba fanalana rivotra
Tombanana ho azy ny fanerena ilainy hifanaraka amin'ny habetsahan'ny rivodoza kendrena araka ny fiovan'ny marary ary manome IPAP sy EPAP tsikelikely.
ICU, Dept.Dept.Neurochirurgie dept.Departemantan'ny Geriatrics Dept.
- Batterie manana fiainana 8 ora
-5.7 mirefy efijery LCD miloko
-Fanaraha-maso bokotra iray
Ny trolly dia azo ampitaina amin'ny ventilator, bateria, humidifier, boom, cylinder oksizenina, fantsona ary saron-tava amin'ny fotoana iray, ary ny fitaovana fitsaboana manontolo dia azo afindra amin'ny tanana iray.
Premium Automatic Synchronization Technology
Fandrindrana olona-milina tsara
-Ny fitaovana dia miteraka inhalation mifototra amin'ny fikorianan'ny sy ny habeny, ka afaka mitsara ny fotoana trigger araka ny ezaka inhalation ny marary.
-Ny trigger dia manana naoty 3, ary afaka manome fahafaham-po ny marary mila ny tokonam-pandrenesana manokana
-Ny fitaovana dia afaka mampifanaraka ho azy ny lojika algorithm amin'ny toetry ny aretina sy ny toe-javatra mitafy.Na dia ao anatin'ny fiovan'ny rivotra mahery vaika na ny leakage aza dia tazony ho marina sy tsy miovaova ihany koa ny tsindry.
Fanaraha-maso fifantohana oksizenina marina Oksizenina tsara kokoa
-Fanatsarana avo lenta ny saturation oksizenina amin'ny ra amin'ny alàlan'ny kajy marina sy azo antoka ary manitsy ny fifantohana oksizenina
-Mifandraisa mivantana amin'ny rafitra famatsiana oksizenina afovoany, ary
afaka miasa tsy misy tondro fikorianan'ny oksizenina fanampiny.
-Tena fanaraha-maso ny fifantohana oksizenina.Ny fanairana dia ateraky ny fifantohana oksizenina tsy ara-dalàna ho an'ny fiarovana amin'ny fitsaboana oksizenina.
Ireo singa mifandraika amin'ny ST-30H
Ventilation mode S/T,CPAP,S,T,PC,VAT
Ofifantohana xygène 21%-100%
Shaben'ny creen 5.7 mirefy loko efijery
IPAP 4-30 smH2O
CPAP 4-20 smH2O
Target tidal volume 25ml-2500ml
Backup BPM 1-60BPM
Backup Ti 0.2s-4.0s
Rfotoana izao 1-6Levels
Rfotoana amp 0-60 min（Irayunit isa-minitra)
Rtsindry amp CFomba PAP: 4cmH2O-CPAP; Fomba hafa: 4-25cmH20
tsindryfanampiana 1-3 ambaratonga
Tonga ho azyTimin 0.2-4.0S
Spontane Timax 0.2-4.0S
I-Fametrahana trigger Auto,1-3 ambaratonga
E-Fametrahana trigger Auto,1-3 ambaratonga
Thidin'ny rigger Off,0.3-1.5S
Mfomba fandrefesana tsindry TIzy io dia sensor sensor amin'ny fantsona oksizenina amin'ny lafiny saron-tava
Rdata fanaraha-maso eal-time Oxygène concentration/Oxygène Loharano fanerena/Tsindrina/Ventilation isan-minitra/Fanafoanana/Fomba fivoahana amin'izao fotoana
Alarms Apnea/Fampitahana/Valin'ny minitra kely/Volan'ny tondra-drano ambany/Famonoana/Fanerena mahery
Bbateria ackup Rbateria backup emovable (Mijanòna 8 ora
WVALO MAin devive: 2.9kg Batterie: 2.6kg
Dimensions (LWH) 24.3×16.7x13sm
AC voltage 110-240VAC
Efepetra ara-dalàna 110-240VAC, 50/60Hz
Hfaritra fihinanana 40-70 ℃
Vokatra mafana, Sitemap Ventilation tsy invasive amin'ny ankizy, Ventilator tsy invasive, Fitaovana sy fitaovana hôpitaly, Machine Manadio Cpap, Ventilator Online, Fitaovam-pitaterana tsy misy rivotra,